WordPress uye MySQL: Chii Chako Izwi Rekuverenga? | Martech Zone
Chipiri, August 26, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pakave nekumwe kutaura pamablog maererano nehukuru hwepakati peiyo WordPress posvo. Imwe mwenje yakaburitswa kuti Injini dzekutsvaga dzinongoyera kukanganisa kwekutanga x nhamba yemavara, uko x parizvino isingazivikanwe. Nekuda kweizvozvo, chero chinhu mushure meizvozvo kungori kutambisa mazwi.
Image kubva wordle!
Ini ndiri nani garrulous nemablog angu kutumira saka ndichaita yekuwedzera imwe ongororo uye ndione kana mukurumbira wepositi kubva pakutsvaga mhinduro kune chero kuwirirana kune shoko count. Ini handizo nyanyisa sainzi, asi ini ndoda kutora kutarisa kwakadzama.
Ndingaite sei kubvunza WordPress yeIzwi Kuverenga?
MySQL haina yakavakirwa-mukati izwi kuverenga basa kweMySQL, asi sekungofanana nemimwe mimwe mibvunzo isina kupindurwa, mumwe munhu akangwara pane blogosphere akatopindura mashandisiro ekushandisa MySQL kuwana Izwi Rekuverenga.
Heano emunyori izwi rekuverenga query rakagadziridzwa kune iro dhatabhesi reWordPress:
Sarudza`ID`, `post_date`,` post_type`,
Kuva ne `post_type` = 'post' NE` post_status` = 'publish'
KUTAURA NE` post_date` DESC
ZVIMWE 0, 100
Ini parizvino handinyore kune iyo 'yakakwana post saizi' nekuti chii chinopa huremu neinjini yekutsvaga hakusi kungoverengwa kweshoko, asi huwandu hwehukama kune izvo zvemukati. Kana iwe uine zviuru zviviri zvemashoko ekutumira zvinokwezva yakawanda yekubatanidza kutarisisa, saka saizi chaiyo yepositi yako yaive mazwi zviuru zviviri.
Tags: mysqlnhamba yemazwisqlshoko countWordPressmashoko
Ko yako Izwi Richaverenga Kukanganisa Kushanya?
Aug 27, 2008 na2:21 PM
Nekuda kweizvozvo, chero chinhu chinotevera chingori kutambisa mazwi.
Zvakanaka, chero uchinyorera Google, uye kwete vaverengi vako… 😉
Pane plugin inonzi "Blog Metrics" iyo inokuudza avhareji yemazwi kuverenga kune ako mablogiki zvinyorwa nezvimwe. Wadii kuedza izvozvo?
Ndinonyora kusvika ndawana pfungwa yangu. Ini ndinofunga hupenzi kuti vanhu vanotenga zvemukati vakaputirwa nekuverenga mazwi.
Sep 11, 2011 na6:28 PM
Casey - Ini ndinobvumirana newe zvachose. Ini ndinofunga pane mikana yekushandisa mifananidzo uye mabara mapoinzi kukwezva vanhu kuti vaverenge kuburikidza nezviri mukati, asi ndinonyora kusvika ndafunga kuti pfungwa yacho yaitwa… uye ndinoedza kuita zvimwe kana zvishoma.